Nato: Traamp yaada Maakroon waayee 'Nato' dubbataniin 'badaa' jedhan - BBC News Afaan Oromoo
Nato: Traamp yaada Maakroon waayee 'Nato' dubbataniin 'badaa' jedhan
Pireezidantiin Ameerikaa Doonaalad Tiraamp yaada Imaanu'eel Maakroon waayee 'Nato' yoo dubbatan ''dhaabbata sammuun isaa du'edha'(brain dead) jechuun kennan yaada badaa(nasty) jechuun qeeqan.
Bara 1949 biyyoota lixaa yaaddoo Yuuniyeenii Sooviuyeet irraa ittisuuf miseensota 11 kan hundeeffame Nato'n hundeeffama isaa waggaa 70'ffa dhiyeenya magaalaa Landanitti kabajaa jira.
Hoggantootni biyyootaa miseensa gamtaa kanaa ta'an kabaja kanaratti argamuuf gara Biriteen kan imalanii jiran yoo ta'u, Tiraampis achitti argamaniiru.
Turkiin shororkeessaa deeggarta jechuun Maakroon himatte
Ameerikaa, Tarkiifi Firaans Nato qeeequun hireen dhaabbatichaa fuula duraa maal ta'uu mala gaaffii jedhu kaasiseera.
Pireezidantiin Firaans Imaanu'el Maakroon dhaaba biyyi miseensa taate tokko yoo haleelamte akka hundi kenya haleelamnetti walirra aannaa jechuun waliigalaanii dhaaban kanaan dhaaba ''sammuun du'aa'' jechuun qeeqaniiru.
Tiraampis yaada Maakroon kanaan ''yaada badaa'' ittiin jedhaniiru.
Ibsa Miidiyaaleef achuma Biriteeenii kennan kanaan, Nato'n kaayyoo guddaa galmaan gahuuf hojjeta yaadni Maakroon ''arrabsoo guddaadha'' jedhan.
Firaans 'Nato' keessaa bahuu akka maltu himanii, maaliif gaaffi jedhu garuu hin deebifne.
Maakroon ji'a darbe miseensonni Nato dhimmoota murteessoorratti wal tumsuutti hin jiran jechuunis qeeqanii turan.
Nato'n akkamiin hundaa'e?
Dhaabni kun waraanni addunyaa lammaffaa xumuramee wayita waaraanni ololaa ykn Cold War eegalu biyyootni Awrooppaa 10 Ameerikaa fi Kaanaadaa ofitti dabaluun yaaddoo nageenyaa Yuuniyeenii Sooveet irraa aggaamamuu malu qolachuuf hunda'e.
Miseensonni jalqabaas Yunaatid Kiingidam, Firaans, Itaalii, Kaanaadaa, Norwaay, Beeljiiyeem, Neezerlaand, Iyiislaand Luukzeemberg fi Poortugaal turan.
Ameerikaan ba'aan 'NATO' natti ulfaate jetti
Bara 1999'ttti lakkoofsi miseensotaa 29 kan gahe yoo ta'u biyyi dhumarratti itti makamte Montenegroodha.
Tiraamp Maakroon miseensota Nato'f kabaja malu irraa mulqaniiru jechuunis komataniiru.
Tiraamp maataan isaanii dhimma 'Nato' irratti filatamuu isaaniin dura ejjennoon qaban 'Nato' kan qeequ kan ture yoo ta'u, osoo diigamee rakkoo hin qabu jedhanii akka yaadan bara 2016 dubbatanii ture.
Waashingatn baasii dhaaba kanaa keessaa 70% kan baastu ta'uunis, Tiraamp waayee 'Nato' irra deddeebin akka yaadan isaan dirqisiiseera.
Tarkiinis fedha Nato'n ala hariiroon Moskoo waliin cimsaa jirtu yaaddoo uumee kan jiru yoo ta'u, Gamtaan Awrooppaa miseensotni isaa 22 ta'an miseensota Nato's ta'an Tarkiif meeshaa waraanaa akka hin gurgurre dhorkeera.
Waraana Siiriyaa keessatti ejjennoo 'Nato'n qabuun alatti hirmaachuunis biyya bara 1951'tti miseensa Nato taatee Tarkiirratti dhibbaa uumeera.
Kanarraa kan ka'e waggaan 70 hundeeffama Nato gammachuufi injiifannoowaniin yaadatamuu caala waldhabdeewwan jiraniin haguugamee darba jira.
Hireen Nato akkam ta'a?
Bakka qaamni sodaatamee dhaabbatni kun hundaa'eef, Yuuniyeeniin Sooviyeet, hin jirretti ammaan tana Nato'n hagama takka barbaachisaadha gaaffiin jedhu irra deeddibiin ka'a.
ka'u yeroo ta'u ammallee Rashiyaan biyya meeshaa waraanaa gurguddoo hidhattee jirtu waan taateef duudhaa waloofi bilisummaa miseensotaa eegsisuun barbaachisaadha jedhu hoogantootni dhaabbatichaa.
Hireen Nato ejjennoo Raashiyaa irratti akka murtaa'us himu.
Hanga Raashiyaan weerartummaashee hin dhaabnetti Nato'n ittisa waloo biyyootaa ta'ee itti fufaa jedhu itti aanaa barreessaan Nato duraanii.
Kanarraa ka'uun dhaabni kun yoo xiqqaate waggaa 10 tarii ammoo waggaa 70 kan biroo ni qabaataa jedhu.
Yaada wal faallessaa Tiraamp kennaniin duubatti Koongirasiin Ameerikaa wixinee biyyattiin miseensummaa Nato'n turuu sagalee caalmaan raggaaseera.
Ameerikaan 'NATO'f gumaachi gootu hagam?
Ministirri Haajaa Alaa Tarkii Maakiroon shororkeessaa deeggara jedhe